ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်အားလုံးအားနိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ်စိစစ်ရာတွင် U N နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများအားအသိသက်သေထား၍ပြီးပြတ် အောင် စိစစ် ကောက် ယူသွားမည်။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်အားလုံးအားနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်စိစစ်ရာတွင် U N နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများအား အသိသက်သေထား ၍ပြီးပြတ်အောင် စိစစ်ကောက် ယူသွားမည်ဟု ဒေါက်တာစိုက်ခန်းက (၂၉ – ၄- ၂၀၁၃ )နေ့ပြုလုပ်သောအစည်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
(၃၀ – ၄ – ၂၀၁၃ ) ကြေးမုံသတင်းစာစမျက်နှာ(၂၄) ကျောမျက်နှာဖုံးအဆက်—စာမျက်နှာ (၉) ၊ ကော်လံ(၁)
ဒုက္ခသည်မိသားစုများ အမိုးအကာရောက်အောင် လူနေအိမ်အမြန်တည်ဆောက်
(………….. နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်ရှိ ဒုက္ခသည်အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည် နယ် အတွင်း နေထိုင်သူအားလုံးအား နိုင်ငံသားဟုတ်၊ မဟုတ် စိစစ်ရာတွင် အခက်အခဲ မျိုးစုံကြုံတွေ့ ရမည်ဖြစ်သော် လည်း နှစ်ဖက် ရပ်မိရပ်ဖများ U N နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွ့အစည်းများအား အသိသက်သေ ထား၍ပြီးပြတ် အောင် စိစစ်ကောက် ယူသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ )
အထက်ပါအတိုင်းဒေါက်တာစိုက်မောက်ခန်းကအစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့ကောင်း(၃၀ – ၄ – ၂၀၁ ) ကြေးမုံသတင်းစာ မူရင်းကိုပူးတွဲတင်ပြပါ သည်။
စစ်တွေတွင် စာရင်းကောက်ခံမှုပြုပါကလည်း U N နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွ့အစည်းများအား အသိသက်သေ ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted on May 6, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အင်ဒိုနီရှား နိုင်ငံသားများက မြန်မာနိုင်ငံမှ မွတ်စလင်မ်များ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအပေါ် မကျေနပ်မှုကြောင့် တရားဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။	ပြည်တွင်း၌အကြမ်းဖက်ဖေါက်ခွဲဖျက်စီးမှုများ ပြုလုပ်ရန်သတင်းများရရှိထားသဖြင့်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်ရန်ညွှန်ကြားထား၊အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်သည့်မြို့များ၌စီမံ ချက်ဖြင့် စုံစမ်းစစ် ဆေး လျက်ရှိ →